ဘိုကလေး-စက်ဆန်း-ထော်ပိုင်-အမာလမ်းပေါ်၌ တည်ဆောက်နေသည့် စက်ဆန်းချောင်းတံတား ဖေဖော်ဝါရီလအတွင် - Yangon Media Group
ဘိုကလေး-စက်ဆန်း-ထော်ပိုင်-အမာလမ်းပေါ်၌ တည်ဆောက်နေသည့် စက်ဆန်းချောင်းတံတား ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်
ဖျာပုံ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၇
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဘိုကလေးမြို့နယ် ဘိုကလေး- စက်ဆန်း-ထော်ပိုင်- အမာလမ်းပေါ်ရှိ စက်ဆန်းချောင်းကို ဖြတ်သန်းတည်ဆောက်နေသော စက်ဆန်းချောင်းတံတားအား ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း အပြီးတည် ဆောက်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
ဘိုကလေးမြို့နယ် စက်ဆန်း ကျေးရွာအနီးရှိ စက်ဆန်းချောင်းတံတားအား တံတားဦးစီးဌာနတည် ဆောက်ရေးအဖွဲ့(၄)၊ တံတားအထူးအဖွဲ့ (၁၅)မှ ၂ဝ၁ဝခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ စတင်တည်ဆောက်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း အပြီးတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါတံတားကြီးမှာ ဘိုကလေးမြို့မှ ၁၈မိုင်အကွာ ဘိုကလေး-စက်ဆန်း-ထော်ပိုင်-အမာလမ်းတွင်တည်ရှိပြီး ဖျာပုံ-ကျုံးကဒွန်း ၁၅ မိုင် ၃ ဖာလုံ၊ ကျုံ ကဒွန်းစက်ဆန်း ၁၉ မိုင် ၁ ဖာလုံအကွာတွင် စက်ဆန်းချောင်းအား ဖြတ်သန်းတည်ဆောက်ထားပြီး ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် လွန်စွာအရေးပါသော တံတားကြီးတစ်စင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါတံတားကို ခွင့်ပြုငွေ ကျပ် ၇၃ဝ၅ သန်းဖြင့် တည် ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး တံတားကြီး၏အရှည်မှာ ၁၇၈၁ ပေ ၆ လက်မ၊ ယာဉ်သွားလမ်း အကျယ် ၂၄ ပေ၊ လူသွားလမ်းအကျယ် တစ်ဖက်လျှင် သုံးပေခြောက်လက်မ (Bored Pile. RC Concrete)ဘိုးပိုင်အာ စီကွန်ကရစ်အမျိုးအစားဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ကာ ရေလမ်း ကင်းလွတ်နယ်မြေမှာ အမြင့်ပေ ၄ဝ အကျယ် ၂၁၈ ပေရှိသည်။
စက်ဆန်းချောင်းတံတားကြီး ဖွင့်လှစ်ပြီးစီးသွားပါက စက်ဆန်း ကျေးရွာမှ ဘိုကလေးမြို့သို့ကား ဖြင့်နာရီဝက်ခန့်ဖြင့် သွားရောက် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယခင်ကရေလမ်း ခရီးဖြင့် ဘိုကလေးမြို့သို့နှစ်နာရီ ခန့် အချိန်ကြာမြင့်စွာသွားလာရသဖြင့် ပြည်သူများအချိန်ကုန် လူပန်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ယင်းတံတား ပြီးစီးပါက ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာ ၃၂ ရွာမှ ကျေးလက်နေပြည်သူ များအတွက် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအဆင် ပြေလာကာ ထော်ပိုင်ကျေးရွာနှင့် အမာမြို့သို့လည်း ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျောက်မဲမြို့တွင် စစ်ရှောင်ပြည်သူ တစ်ထောင်ကျော် ရောက်ရှိနေပြီး အကူအညီများ လိုအပ်နေ
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးတွင် ငလျင် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်မှုများ ဆေ??
မွန်ပြည်နယ်မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အေးချမ်းစွာ စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ေ?
အွန်လိုင်းရှော့ပင်းများကို အခွန်ကောက်ရန် လွှတ်တော်တွင် တင်ပြ
ကမ္ဘာ့ပြည်သူလူထုစိတ်အဝင်စားဆုံး မြို့သုံးမြို့ထဲတွင် ရန်ကုန်မြို့ ပါဝင်နေ၊ မြို့တော်ကိုအ??